भरतपुरको जग हाल्यौं, अब पूर्णता दिन्छौंः दाहाल - NepalDut NepalDut
आगामी स्थानीय तहको चुनावका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चासो रहेको क्षेत्र हो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका । सत्तारुढ गठवन्धनका तर्फबाट प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालको उम्मेदवारी परेको यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् ।
अघिल्लो स्थानीय चुनावमा रेणुले नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन् । मतगणनाका क्रममा हारको त्राश उत्पन्न भएपछि माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र चपाएको घटना अहिले पनि धेरैले बिर्र्सिएका छैनन् । यसपालीको निर्वाचनमा पनि रेणुले ढुक्क हुन अवस्था छैन । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले उनलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
रेणु भने आफू दोस्रोपटक मेयरमा दोहोरिनेमा विश्वस्त छिन् । कांग्रेसका भोटरले पार्टीको निर्देशन पालना गर्दै आफूलाई भोट दिने उनको विश्वास छ । चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेकी दाहालसँग न्यूज कारखानाले गरेको कुराकानी :
– चुनावको तयारी र प्रचारप्रसारका लागि घरदैलोमा हिँडिरहनु भएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
जनतामा जाँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । जनतामा उत्साह छ । विकासका लागि रेनु दाहाल भन्‍ने छ । ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिन र समयमै सम्पन्‍न गर्नका लागि पनि रेनु दाहालको विकल्प छैन । उहाँबाहेक अरुले गर्न सक्दैन भन्‍ने आममहानगरबासीको बुझाइ छ । जनस्तरमा मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो उत्साह पाएको छु ।
– पहिलो कार्यकालमा के गर्न सक्नुभएन र फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा उमेदवारी दिनुपर्‍यो ?
पहिलो कार्यकालमा नसकेको भन्‍ने होइन । दीर्घकालीन सोचका साथ भरतपुरको विकास र समृद्धिका लागि हामीले जग तयार गर्‍यौं । अब यसलाई पूर्णता दिनका लागि अब एक कार्यकाल चाहियो । जसले बच्चा जन्माउँछ, बच्चाको माया आमालाई जति त हुँदैन नि । जति पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढेका छन् । जस्तो, नारायणी तटबन्धनको पाँच अर्बको आयोजना छ । त्यसलाई सुरुवात हामीले गर्‍याौँ । अब सम्पन्‍न गर्नु छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई पूरा गर्नु छ । ठूला सडक र पूर्वाधार बनेका छन् । ६ र ४ लेनका सडक बन्दै छन् । महानगरीय चक्रपथ योजना छ । यी सबै योजना पूरा गर्नुछ । नारायणी नदीलाई ‘सी बीच’ मोडलको रूपमा विकास गर्नुछ ।
– प्रचण्डकी छोरी भएकैले तपाईंले धेरै अवसर पाएको भन्छन् नि ?
– गठबन्धनकै दलमध्येको कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षबाट जगन्‍नाथ पौडेलले मेयरमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिनुभएको छ । यसले प्रभाव पार्ला नि ?
खासै प्रभाव पार्लाजस्तो मलाई लागेको छैन । किनकी गठबन्धनका दलको साझा उमेदवारका रुपमा मेयरको आधिकारी उमेदवार म नै हो । कांग्रेसका केन्द्रीय नेता, प्रधानमन्त्री एवं सभापतिदेखि लिएर शीर्षस्थ सबै नेताले उहाँ (पौडेल) लाई फिर्ताको लागि आग्रह गर्नुभयो । पार्टीले गरेको आग्रहलाई पनि जगन्‍नाथजीले स्वीकार गर्नुभएन । उहाँले स्वतन्त्र उमेदवारी दिनुभएको छ । देशभर अन्यत्र पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदाखेरी कस्तो भयो भनेर इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ ।
स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर पार्टीको सर्लक्कै मत जान्छ भन्ने लागेको छैन । दोस्रो कुरा यो गठबन्धन कुनै दल विशेष होइन । राष्ट्रको भविष्यलाई हेरेर, आवश्यकतालाई बुझेर, संविधान र उपलब्धिका पक्षधर मिलेर गठबन्धन बनेको छ । जनयुद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता र २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि आएका हामी सहयात्री पार्टीबीच गठबन्धन भएको छ ।
यो दूरगामी महत्वलाई बुझेर पाँच दलीय गठबन्धनको साझा दृष्टिकोणसहित देश अघि बढेको छ । उहाँले बुझ्न सक्नुभएन कि भन्‍ने ठान्छु । उहाँलाई पार्टी (कांग्रेस) ले कारबाही गरिसकेको पनि छ । उहाँ कांग्रेसको आधिकारीक उमेदवार होइन । स्वतन्त्र उमेदवार हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र हुँदै गर्दा त्यतिधेरै असर गर्छजस्तो लागेको छैन ।
– गठबन्धन दलविरुद्ध एमाले र राप्रपाबीच पनि तालमेल भएको छ । तपाईंलाई भारी पर्ला नि ?
धर्मनिरपेक्षको विरोधी र हिन्दू राष्ट्रवादी शक्तिसँग एमालेले तालमेल गरेको छ । त्यसले गर्दाखेरी उहाँको हिजोका गतिविधिले गर्दा पनि । सम्मानित संसद दुई-दुई चोटी विघटन गर्ने र संसदको गला रेट्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो । हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि खोस्‍ने काम केपी ओलीबाट भयो । एकलौटी र निरकुंश ढंगबाट उहाँ अघि बढ्नुभयो ।
– सडक मात्रै कालोपत्रे गरेर विकास भएको भन्‍न नमिल्ने कुरा आइएका छन् नि ?
चौकीडाँडादेखि गोलाघाटसम्म खानेपानीको सुनिश्चितता भएको छ । झण्डै पौने चार अर्बका खानेपानी आयोजना अगाडि बढाएका छौँ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तर बढाएका छौँ । नगरस्तरीय पार्क बनाएका छौँ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि महानगर, संघ र प्रदेशले विभिन्‍न स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेका छन् ।